guuleed | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 20
Author Archives: guuleed	Dhagayso Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada.
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waxa uu kamid yahay barnaamijyada habeen waliba ka baxa Idaacadda Alfurqaan, waxaana lagu soo qaataa waraysiyo lagu falanqeynayo xaaladda dalka. Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 01 02 2017	Read More »
Warka Duhur ee ka baxay idaacada alfurqaan waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka duhur 01 02 2017.	Read More »
Warka Duhur waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Kala Deg Warka duhur 31 01 2017.	Read More »
Warka Subax waxa uu kamid yahay sadaxda war ee ka baxa idaacada alfurqaan waxaana saaka ku baxay qodobo kala duwan. Halkan Kala Deg Warka Subax 31 01 2017.	Read More »
Dhuuxa Wareysiyada Waa Barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa Caawa Lagu soo qaatay qodobo Muhiim Ah. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 30 01 2017.	Read More »
Warka Duhurnimo waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga Hoose. Halkan Kala Deg Warka Duhur 30 01 2017.	Read More »
Warka Subax idaacadda alfurqaan waxaa saaka ku baxay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga Hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Subax 30 01 2017.	Read More »
inta la xaqiijiyay 5 ruux ayaa ku dhintay rasaas dablay hubaysan ay ku fureen dad ku sugnaa Masaajid ku yaala magaalada Quebec ee dalka Kanada. Dadka dhintay ayaa kamid ahaa 50 ruux oo ku cibaadeysanayay Masaajidka. Booliska Kanada ayaa sheegay inay xireen 2 qof oo ay kaga shakiyeen inay ku lug leeyihiin weerarka lagu laayay Muslimiinta. Warbaahinta Kanada ayaa qortay in sadax ruux ...	Read More »
Dhaqaatiir ka tirsan jimciyada samafalka Al-ixsaan Alkhayriyaha oo hoostagta xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa ku sugan Gobalka Shabeelaha Dhexe. Dhaqaatiirta ayaa indhaha ufiiqay 34 ruux oo isugu jiray rag iyo haween. Howshaan oo lagu qabtay Magaalada Ganboole ee shaeelaha Dhexe waxaa soo dhaweeyay dadka ka faa’ideystay indho fiiqista oo ahayd mid lacag la’aan ah. Halkan Ka Dhageyso Dadka indhaha loo fiiqay. ...	Read More »
Waxaa isa soo taraya dadka ka hadlaya ee aragtidooda ka dhiibanaya weerarkii jimcihii lasoo dhaafay xarakada Alshabaab ku qaaday xero ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyoow ee jubada Hoose. Weerarkaasi oo qasaaro xoogan dhaliyay waxaa ku dhintay in ka badan 60 askari. Dowladda Kenya ayaa ka gaabsanaysa inay faafaahiso qasaaraha ay la kulmeen Ciidamadooda. Abwaan Taakow Macalim Ciise oo ...	Read More »
Page 20 of 149« First...10«1819202122	»	304050...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan